Sida loo Connect iPad in TV iyo Play iPad on TV (Mavericks ka mid ah)
Waa arrimuhu aad caadi maalmahan nagu ah in aan kala soo bixi iyo daawan video ah on our iPad ama qalab kale oo mobile . Sababta ugu weyn ee isagoo jirto maktabadda weyn ee videos laga heli karaa internetka . Waa ku dhaw raaxadeeda waxa aan kaliya ku saabsan, laakiin sidoo kale awood u leh inay helaan files warbaahinta offline u madadaalada on go ah. Si kastaba ha ahaatee, Raalli ahaanshaha daawashada video ah on shaashad weyn weli waa la bedeli karin. Qaar ka mid ah oo naga mid ah ayaa weli laga yaabaa inay doonayaan in ay ku xidhmaan iPad ama qalabka our mobile in TV ee daawashada filimka, slideshow sawir ama iwm gargaarka qolka fadhiga ama jiifka. Haddii ay sidaas tahay, aad leedahay doonaa xalal badan oo sida la raaco si aad u eegto.
Xulashada 1: fiidiyo A / V Cable
Xulashada 2: wirelessly la Cloud Storage
Xulashada 3: HDMI Cable & adabtarada
Xulashada 4: AirPlay in TV Apple
Waxaad u baahan doontaa cable iPad-socon ah. Haddii aadan hore u yeelan, waxaad si fudud u qaadan kartaa a fiidiyo A / V cable on Amazon ama Arbacada. Waxay leedahay siddeedaad-inch fur seddex nidar A / V mid ka mid dhamaadka iyo / casaan / RCA xiriir ah saddex-fur jaalaha cad ee kale. Haddii kale, waxa kale oo aad ka daawan kartaa files video kaydsan aad iPad wirelessly TV iyada oo ay 2nd ama 4th doorasho.
Talaabada 1: Calan iPad fursadaha video on your iPad
Fiiro gaar ah : Ka hor inta aan samaynta fursadaha video ah, fadlan hubi in qaab file video waa socon for loo maqli on your iPad. Haddii kale, waxaad u baahan doontaa si aad u badalo ka hor la Converter video . Tag Settings Videos Video Settings ka menu ugu weyn. Waxaad ka arki kartaa saddex video goobaha: TV Out, Widescreen iyo TV Signal. Calan "TV Out" fursad u "Weydii", ka dibna dooro nidaamka telefishanka.
Haddii aad tahay qof ee USA, waxaad sameyn kartaa sida NTSC signal TV. Hoos waxaa ku qoran liiska heerarka kala duwan laga isticmaalo dunida:
NTSC : Israa'iil, Japan, Korea, Filibiin, Bolivia, Venezuela, Chile, Columbia, Mexico, Peru, Kanada, USA, Taiwan
Pal : Indonesia, India, Jordan, Malaysia, Pakistan, Qadar, Singapore, Thailand, Turkey, Yemen, Austria, Belgium, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, Talyaaniga, Malta, Holland, Germany, Norway, Portugal Romania, Spain , Sweden, Ingiriiska, Switzerland, Algeria, Argentina, South-Africa, Brazil, Jamaica, Australia, New Zealand, Hong Kong, Macao
SECAM : Ciraaq, Iiraan, Ukraine, Russia, Hungary, Rumania, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Masar.
Talaabada 2: Isku aad iPad in TV
Geli siddeedaad-inch siib A / V saddex-oo nidar galay aad iPad iyo xirmaan darafka kale in ay TV-ga:
Bareesada Red RCA furaysto galay Jack RCA jaalaha ah ee TV
Bareesada Yellow RCA furaysto galay Jack RCA cad ee TV
Bareesada White RCA furaysto galay Jack RCA casaan TV ee
Waxaa la samayn. Waxaad daawan kartaa iPad on TV oo wuxuu ku raaxaysan nolosha digital.
Fiiro gaar ah : Haddii aad rabto in lagu wareejiyo files ka iPad si Mac / Lugood / iPod / iPad / iPhone, waxaad isku dayi kartaa awood badan iPad qalab kala iibsiga file ah iyo tixraac hago.
Halkii gurguurato iyada oo la fiilooyinka, waxa kale oo aad la wadaagi karto oo ay daawadaan videos on your TV wirelessly dhex iPad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in geliyaan videos ama iyagii u badbaadiyey on kaydinta Cloud ah. Waxaa jira mid u hurtaa sidii ay u iDevices, kuwaas oo iCloud ah. Sidaa darteed, aad si fudud u howl galino in aad iPad ka dibna dooro nooca waraaqaha ama faylasha aad rabto in aad la taageeray iyo badbaadiyey gal iCloud. Waxa kale oo jira kala duwan Cloud dhufto ee kaydinta laga heli karaa haddii aad rabto in qaar ka mid kale oo ay eegaan.
Marka aad ku badbaadi videos ku gal ama iCloud kale madal lagu kaydiyo Cloud, gal account ka yimid TV. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa dhirtuba u file ka dibna dooro for loo maqli karo. Marka laga reebo si uu u daawado videos on your TV awoodo, waxa kale oo aad ka heli karaan faylasha lagu kaydiyaa iCloud waqti kasta iyo meel kasta oo aad u baahan tahay si ay u. Haddii aad qabto su'aalo kale oo ku saabsan sida loo wadaagi videos ka iyo in qalab kale, akhri u geliyey Noocyada caadiga ah ee Video Sharing .
Marka laga reebo A / V cable fiidiyo ah, waxaad si fudud u isticmaali kartaa cable HDMI iyo adabtarada Haddii aad qabto wax yaal. Haddii kale, waxaa kale oo doorasho ah la awoodi karo haddii aad ay ahayd inay iyaga iibsan online. In TV ku xiridda aad iPad la cable HDMI iyo adabtarada badan yahay mid sahlan marka loo eego midab A godadka / V.
Connect adabtarada si aad iPad iyo cable in ay adabtarada ah
Connect iyo darafkiisa kale inta cable in ay TV-ga
Daar TV iyo dooro il aqbasho sax ah (ka cable in ay xiriir TV)
Your screen iPad si toos ah u yimaado doonaa TV
Haddii aad qabto TV Apple ah oo aad dooneyso in ay ka faa'iideystaan ​​feature AirPlay on your iPad ah, fadlan hubi in labada iyaga ka mid ah waxay ku xiran yihiin shabakad isku Wi-Fi ka hor inta aanad bilaabin wax qabtaan. Marka laga reebo in, sidoo kale si loo hubiyo in aad iPad waxaa socda ugu yaraan 5 macruufka iyo TV Apple oo ku saabsan update software dambeeyay. Ka dib markii in, si fudud u raac talaabooyinka hoos ku qoran:
Leexo AirPlay in "On" on your TV Apple
Guddi feature AirPlay ku saabsan iPad ka menu multi-hawsha
Dooro TV Apple dibna ugu noqda "Mirroring"
Hadda noqon doonaa in aad awoodid in aad aragto iPad Seme on TV Apple ah
> Resource > Beddelaan > Sida loo Connect iPad in TV iyo Play iPad on TV (Yosemite ka mid ah)